Waraanni piropaganda Wayyaanee ABN fi ABO badiidhaan wal .. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosWaraanni piropaganda Wayyaanee ABN fi ABO badiidhaan wal ..
Waraanni piropaganda Wayyaanee ABN fi ABO badiidhaan wal ..
Waraanni piropaganda Wayyaanee ABN fi ABO badiidhaan wal madaalchisuuf hedduu rakkataa jiru-
“ABO ” jaal gashuu lammessa “Wallagga Magaalaa Naqamtee
“ABO ” Wallagga Magaalaa Naqamtee Kutaa 2ffaa
Kaayyoo ABOtiin Jaalallii onnee keessatti numagartee
Saffisaan share godhuun addunyaa waliin gahuu qabda hirmaadhaa
Addarra dhaabbatan malee, Addisaabaan teenya jechuu hin dhiistu ilmaan nafxanyaa!
The moment awaited for about 150 years by one of the largest ethinic group of east africa A short dacumentary about oromo people of Ethiopia in finfinnee the capital city of ethiopia
ADP (Amahara Dimocratic Party)-NaMA (National Movement of Amhara)-ODP(OPDO) triangle is committing genocide in different parts of Ethiopian empire.
The coordinated crime has manifested itself in the massacre of over 250 civilians, mainly children and women, in Benishangul-Gumuz area few days ago by forces from Amhara regional state, and another massacre of 11 Oromo civilians in Lalo Assabi, West Wallaga area, yesterday by the national defences force of Ethiopia.
Names of the Oromo civilians who have been massacred by the EPRDF/OPDO led fascist military are as follow:
1. Carraa Baqqalaa
2. Habtaamuu Bulchiisaa (father & family head))
3. Taammiruu Gabayyoo
4. Gammee Mulgeetaa
5. Margaa Damusee
6. Bari’oo Owwaataa
7. Addaamuu Abdiisaa &
8. Two drivers from Inango area whose names have not yet been confirmed are among the massacred.
Four people were shot & killed inside a Bajaj transport tricycle, while Charraa Baqqala & Bari’oo Owwaataa were shot by the military after they were forcefully taken out of the ‘Bajaj’ Tricycle.
Obbo Waltajjii Yaadataa’s house was burned down by the Ethiopian military for the second time.
These pre-planned and well coordinated crimes & atrocities are happening to Oromo and other oppressed people like Gumuz, through the direct command of the prime minister of Ethiopia and ADP/ODP officilas.
By Yaya bashir Waraanni piropaganda Wayyaanee ABN fi ABO badiidhaan wal madaalchisuuf hedduu rakkataa jiru. Dabballoonni ABNis mootummaan amma waan tarkaanfii fudhachuuf labseef jecha xiyyeeffannoon tarkaanfii kanaa akka gara isaanii qofa hin taane gochuuf ABO hammeessanii ol dhaadessanii ololaa jiru. Tarkaanfiin kan fudhatamu yoo tahe ABN osoo hin taane ABO qofarratti akka xiyyeeffatu waywaachaa jiru. Dhugaan amma mul’atu akka agarsiisutti garuu biyyattii akka hamaatti kan goolaa jiru warra ABN malee ABO miti. ABN fi ABO madaallii wal fakkaataa irra kaa’uuf duula godhamaa jiru kan fashalsuu qabu ammoo ABO dha. Gochaa ABNiin wal isin fakkeessuu malu irraa maayilii hedduu of fageessaa.
“Mootummaan naannoo Amaaraa waraana leenjifatee ummata Oromoo godina kamisee irratti bobbaasuuf qophii xumuratuun saaxilamee jira. Ummatni keenya daguu ciisuu hin qabu ummatni oromoo bakka jirtanii waliif birmadhaa Habashootni waanuma argite ciniinaa jirtii saree maraatte taatee jirtii Alaabaa Minilik kan gadaan irra dabre gad dhaabuu barbaaddii Itoophiyaan duriitii mitii kan amma jirtu tan amma jirtu tana diignee Oromiyaa walaba taate akka ijaarru habashaan wallaaltee itoophiyaa duriif boohaa jirtii yaa ummata oromoo tokkummaan kaanee Wbo keenya bira dhaabbachutu nurraa eeggama jabaadhaa qeerroo fi qarreen oromoo. IUOf!!!!!!!!”
Maaliif maqaa namaa xureesituu….?
Nannoo amhaaraallee mootummaa Federaalaa Yookiin DR ABIY tu bulcha jettanii maqaa maaf xureesituu
Ethiopia: Sidama declares state of impatience.